Fiteny fôrmôzana - Wikipedia
Ireo fianakaviam-piteny fôrmôzana talohan' ny fanjanahan-tany sinoa.
Ny fiteny fôrmôzana dia fiteny malaiô-pôlineziana maromaro, iray amin' ireo vondrom-piteny roa mandrafitra ny fianakaviam-piteny aostrôneziana. Ireo mponina tranainy ao Taioàna, izay 2%n' ny mponina ao amin' io nosy io no miteny azy. Ankehitriny dia heverina fa avy any Taioàna ny fiteny aostrôneziana, noho ny fahasamihafana ara-piteny sy ny fahantaolon' ireo fiteny aostrôneziana tenenina ao Taioàna. Ny mponina hafa (ny Hàna) dia miteny fiteny sinoa (fiteny sinô-tibetàna, ka ny ankabetsahany dia amin' ny fiteny mandarina) sy ny fiteny taioaney (tenim-paritry ny fiteny min-nana, fiteny sinoa tamin' ny Andro Antenantenany).
3 Fisokajiana sy fiteny ao amin' ny vondrona fôrmôzana
3.2 Fiteny ao amin' ny vondrona fôrmôzana
Ny fiteny ao Taioàna, indrindra ny ao amin' ny tapany avaratry ny nosy, izay ahitana ny vondrom-piteny ataialiana sy seedika ary tso, dia nahatonga ny mpikaroka nihevitra fa tao amin' io nosy io no nipoiran' ny fiteny aostrôneziana. Ny fikarohana amin' ny arkeôlôjia sy ny fampitahana ny kolontsaina dia maneho ny fihavanan' ny Taioàna sy ny kôntinenta akaiky azy hatramin' ny fiandohan' ny fiorenam-ponenan' ny mponina tao amin' io nosy io, tamin' ny tanarivo faha-5 tal. J.K., sady nahafaha-manatsoa-kevitra fa ny mponiny dia tompon-tany volohany. Izany dia nahafaha-manatsoa-kevitra koa fa ny nipoiran' ny fiteny aostrôneziana voalohany tokony ho tadivina any amin' ny morontsiraka atsinanan' i Sina, ka mety ao amin' ny fivarinan' ny renirano Yangzi Jiang, izay iroboroboan' ny kolontsain' i Hemudu, izany. Tao no tokony namoronana ny lakana misy fanary na soaka, ny trano miorina amboony vavaray (misy toa tongony), ny fiompiana kisoa sy ny singa hafa mampiavaka ny sivilizasiona aostrôneziana.
Ny fianakaviam-piteny aostrôneziana dia ahitana fiteny mihoatra ny 1 200 ao amin' ny velarana manomboaka any Taioàna hatrany Zelandy Vaovao sy avy any Haoay sy ny nosy Paska hatraty Madagasikara.
Tonga tao Taioàna ny Aostrôneziana tany amin' ny 5 000 taona lasa any ho any tao amin' ny morontsiraka atsimon' i Sina izay nanaovan' izy ireo ny fambolena vary sy karazana ampenba
Ny Hana ao Taioàna dia miteny amin' ny tenim-paritry ny fiteny haka sy an' ny fiteny mina atsimo. Nanomboka nifehy ara-panjakana an' i Taioàna i Sina vao tamin' ny taona 1683 izay nametrahany governora tao. Teo anelanelan' ny taona 1895 sy 1945 no nibodoan' i Japàna ilay nosy. Taorian' ny taona 1945 dia nisedra ny fiantraikan' ireo fiteny sinoa indray ny fiteny fôrmôzana, indrindra ny fiteny mandarina izay lasa fiteny ôfisialin' i Taioàna hatramin' io taona io.
Ny ankamaroan' ny fiteny fôrmôzana dia niharan' ny fiteny fiteny manodidina, indrindra ny fiteny japôney. Ankehitriny dia manome toerana tsikelikely ny fiteny mandarina, izay manjaka ara-kolontsaina, ireo fiteny fôrmôzana ireo. Hatramin' ny taona vitsivitsy izay no nampidiran' ny fitondram-panjakana taioaney ny fandaharan' asa hamerenana indray ny kolontsaina teratany ka isan' izany ny fampidirana ireo fiteny fôrmôzana any an-tsekoly.
Fisokajiana sy fiteny ao amin' ny vondrona fôrmôzana[hanova | hanova ny fango]
Fisokajiana[hanova | hanova ny fango]
Maro ireo fiteny fôrmôzana nanjavona tsy misy mpiteny intsony, ary ny amin ' ireo fiteny sisa tsy maty dia mampanahy; maro ny andalam-pahafatesana satria ny maro amin' ny tanora tompon-tany tsy miteny afa-tsy amin' ny fiteny mandarina. Atao hoe "fiteny aostrôneziana avaratra" ireo fiteny fôrmôzana ireo (ny sampana hafan' ny fiteny aostrôneziana dia ny "fiteny aostrôneziana atsinanana" na fiteny ôseanika sy ny "fiteny aostrôneziana andrefana" dia ny fiteny malaiô-pôlineziana sy ny sisa rehetra). Mbola iadian-kevitra ankehitriny ny fanasokajiana ireo fiteny ao amin' ny vondrom-piteny fôrmôzana.
Fiteny ao amin' ny vondrona fôrmôzana[hanova | hanova ny fango]
Ireto avy ny fiteny fôrmôzana velona: fiteny amisy, fiteny ataialy, fiteny bonona, fiteny kanakanabo, fiteny kavalana, fiteny paioana, fiteny poioma, fiteny rokay, fiteny saaroa, fiteny saisiata, fiteny sakizaia, fiteny seedika, fiteny taô, fiteny troko, fiteny tsôo ary ny fiteny iamy,
Ireto kosa ny fiteny fôrmôzana maty: fiteny basay, fiteny ketagalana, fiteny baboza, fiteny papôra-hôania, fiteny taivôana, fiteny kolôna-pazeha, fiteny siraia ary fiteny makataô.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_fôrmôzana&oldid=1000687"
Voaova farany tamin'ny 26 Janoary 2021 amin'ny 07:47 ity pejy ity.